Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday : Fiovana tena izy amin’izay !
Inty sy nday : Fiovana tena izy amin’izay !
Handray ny fahefam-panjakana amin’ny maha-filohampirenena azy tsy ho ela ny Filoha Rajoelina. Ny lanonam-panosorana azy sy ny fanolorany ny fianianana no andrasana dia miditra amin’ny famindram-pahefana izy dia feno ny fepetra maha-filohampirenena azy.
Efa fantatra koa anefa fa efa mifanaretsaka ny sokajin’olona miandrandra toerana izay manatona ny filohampirenena vaovao. Tsy tokony hatao mahazendana izany satria maro no manana ilay toe-tsaina “sakaizan’ny mpandresy”. Tsy olom-baovao amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana koa anefa ny filohampirenena Rajoelina fa efa nanana traikefa izy tamin’ny naha-filohan’ny tetezamita azy.
Ny fanovana olona amin’ny fisahanan-draharaham-panjakana dia teboka iray ihany amin’ny fanovana tena izy notakian’ny vahoaka tamin’ireny tolona tamin’ny 2009 ireny. Tsy tokony hadinoina mantsy fa izao voka-pifidianana nampandany an-dRajoelina ho filohampirenena izao dia mbola taratr’ilay hetsi-bahoaka tamin’ny 2009 izay nitaky ny fanovana tena izy.
Dia efa miandrandra mafy an’izay ny maro, saingy tokony hitandrina mafy amin’izay fanovana olona izay ny filoha mba tsy sanatria ny olona hotendrena no zary sakana tsy hanana’ny vahoaka risi-po amin’ny fandraisany ny tandrifin’andraikiny.
Etsy ankilany, tsy ny fanovana olona ihany no notakian’ny vahoaka fa ny fanovana ny pôlitikam-pirenena ankapobeny mihitsy. Ekena fa nisy an’iny vinam-pampandrosoana nofaritan’ny filohampirenena tamin’ny fampielezan-kevitra iny saingy mitaky pôlitikam-pirenena ifotorany iny mba tsy ny mpanani-bohitra avy any ivelany no sanatria hanjaka, ary mba tsy ho afa-misehatra eto ny toe-tsaina mpiankin-doha amin’ny any ivelany izay zary hamery hasina ny fiandrianam-pirenena.
Ankoatra ny fanovana ny pôlitikam-pirenena ankapobeny sy ny olona dia isan’ny notakian’ny vahoaka koa ny fanovana tena izy eo amin’ireo rafitra isan-tokony miantoka ny fampihodinana sy fampahombiazana ny vinam-pampandrosoana. Tsy afaka hiantoka ny fampivaingana aan’io vinam-pampandrosoana io intsony ny rafitra navelan’ny mpanjanatany mbola mangeja ny tontolon-draharaham-pirenena ahtramin’izao.
Ny teboka fahefatra takian’ny fanovana tena izy dia ny toe-tsaina sy fomba amam-pihetsiky ny tompon’andraikitra isan-tokony. Raha mbola ilay toe-tsaina mandala ny fitiavan-tena sy fitiavan-kely, ny mieritreritra ny hoe “30 andro fanjava iraika”, ny fanomezana vahana ny havana, ny namana, ny kamarady, ny mpiray antoko, ny mpiray fianggonaa, ny mpiray fiaviana… Sy ny hafa no mbola mahazo vahana, raha mbola ilay toe-tsaina manome vahana ny kolikoly sy ny fanodinkodinana ny marina no mahazo sehatra, dia mbola ho lavitra ny afo ny kitay eo amin’ny fampandrosoana mampangetaheta ny ambanilanitra.
Mitaky ny fampanjakana ny tany tan-dalàna izany, ary tokony hahazo vahana ny fifampifehezana ara-piaraha-monina eo amin’ny vahoaka sy ny mpitantana isan’ambaratonga.
Farany dia omena hasina ny foto-kevitry ny fitsinjaram-pahefana tena izy mba ho tsapan’ny vahoaka tokoa fa izy no loharanom-pahefana ary ny atao rehetra dia ho amin’ny tombontsoan’izy vahoaka kizay loharanom-pahefana.
Raha tsy izay mihatra, farafahakeliny, dia mbola ahiana ho tapaka antenatenam-potoana ny fifampitokisana sy ny fifanarahana eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra (contrat social).
Enga anie ho ahiahy ihany izany.